यो जीवन ज्वार भरिएको छ भन्ने तथ्यलाई तर्क गर्न कठिन छ। जब ज्वारभाटा - पटक कठिन छ - ज्वारभाटा गर्दा भाग्यमानी मान्छे। मान्छे सधैं यो कुरा बुझेका छन्। तिनीहरूले पनि बस जस्तो जान्छ भन्ने कुनै आनन्द छ भन्ने तथ्यलाई बुझ्न। कुनै आश्चर्य तिनीहरू यसो भन्छन्: "प्रेम अमृत, प्रेम र चिसो।" अर्थ र आज हामी छलफल गर्नेछौं भन्दै को महत्त्व।
संग "MEDCOM" स्पष्ट किन हितोपदेश "चिसो" छ?
साँच्चै, phraseologism को पहिलो भाग decipher कुनै आवश्यकता छैन। MEDOC स्वतः व्यक्ति सबै मह र मीठो रुचि छैन भने पनि, स्वादिष्ट र रमाइलो कुरा संग सम्बन्धित छ।
मह मौरीले उत्पादन, तर तिनीहरूले खुसीसाथ खुसी र फलदायी वसन्त र गर्मी छन्, तिनीहरू overwintering लागि राम्रो अवस्था प्रदान गर्न आवश्यक छ। तसर्थ, हितोपदेश मा एक "चिसो" छ।
"अमृत, प्रेम र चिसो जस्तै" वाक्यांश को कल्पना प्रस्ट्याउने, तपाईं आफ्नो व्याख्या गर्न अगाडि बढ्न सक्छ। यसलाई अर्थ सरल राखे: एक व्यक्ति शुभकामना छ, धन र समृद्धि स्वाद गर्न चाहन्छ भने, त्यो काम गर्नुपर्छ के गर्न छ छौँ।
एक मुक्त पनीर मात्र एक चूहादान छ। निस्सन्देह, राम्रो तरिकाले ज्ञात जीवनीहरू आमाबाबुले जीवन मा एक सभ्य सुरु प्रदान dyudey, र तिनीहरू मात्र छन् laurels reaping। उहाँले मानव जाति एक प्रतिनिधि "चिसो", आफ्नो बाटो गुलाब संग strewn थाहा छैन। तर यो दुर्लभ छ। सामान्यतया, कहिलेकाहीं आमाबाबुले के तिनीहरूले गर्न सक्छन् सबै केहि छैन के, र कहिले काँही। तर अन्त मा मान्छे जहाँ त्यहाँ माथि र तल छन् एकदम साधारण जीवन, बाँचिरहेका छौं। हामी "अमृत, प्रेम र चिसो जस्तै" अभिव्यक्ति मात्र होइन जीवनका समस्याहरूको मा परिश्रम र नम्रता सिकाउँछ भनेर भन्न सकिन्छ, तर पनि साधारण मान्छे को एक संकुचित लिपि जीवन समावेश गर्दछ।
deceitfulness मा "Medco"
जानकारी, केवल धेरै छैन, तर धेरै को यो उमेर मा। र universalising र मानकीकृत। यसबाहेक, यी प्रक्रियाहरू कुराहरू, तर पनि मन मात्र होइन कब्जा छन्। सफल हँसिलो चलचित्र तारा वा बलियो र साहसी खेलाडीहरूलाई को र टेलिभिजन प्रसारण।
र बच्चा, तिनी जहाँ कुनै कुरा छैन, पनि अर्थ "प्रेम अमृत, प्रेम र चिसो," सोच्छ के थाह छैन कि टिभीमा ती चमक, सजिलै र स्वाभाविक जीवनमा। त्यसैले लाग्छ - एक ठूलो गल्ती। उदाहरणका लागि, स्क्रिनमा "फलाम मानिस" को छवि embodied गर्ने अभिनेता को एक जीवनी - रोबर्टा Dauni जूनियर - दुवै को पूर्ण उड र पतन हुनेछ छ। अब उहाँले माग छ, तर उहाँले खान केही थियो जब यो अवधि थियो। सायद हलिउड - यो सपना कारखाना, तर यो कम्पनी निश्चित काम गर्ने होइन ती को हड्डी मा खडा छ, सफलता हासिल गर्न काम गरेन। एक सफल "फलाम मानिस," म रूसी phraseology ज्ञात थियो भने, यसो भन्न सके: "तपाईं जान्दछन्, मान्छे, जीवनको आधारभूत सिद्धान्तलाई हितोपदेश व्यक्त" अमृत, प्रेम र चिसो जस्तै "। यसको अर्थ राम्रो पाठक चिनिएको छ। को सफलता प्राप्त बर्बाद छैन किनभने यो अभिव्यक्ति पछि निहित कि बुद्धि, धनी र प्रसिद्ध पनि गर्न परिचित छ। धन, वरिपरि सुन्दर महिला - दर्शक मात्र ठूलो खेल अभिनेता, र फेम बाह्य संकेत देख्नुहुन्छ। तर केही मानिसहरू मूल्य सबै सामान हुन्छ के लाग्छ।
Morale धेरै स्पष्ट छ: एक सजिलो सफलता मा गणना हुँदैन। सामान्य मा, जीवन स्थिर काम र बस काम मा आवश्यक छ। व्यक्ति मान्छे सामना सुधार छ भने मात्र, निरन्तर शिक्षा को स्तर सुधार, यो जीवन मा महत्वपूर्ण कुरा हासिल गर्ने आशा गरिएको छ। आजकल, कुनै मानिस वा महिला लापरवाह हुन सक्दैन। यो कुनै पनि क्षण मा केहि हुन सक्छ आधुनिक जीवनको उपकरण विपरीत छ।
को भनाइ "प्रेम अमृत, प्रेम र चिसो" को अर्थ, पहिले देखि नै छलफल मान बाहेक, हरेक कार्य, घटना मूल्य सुझाव भनेर सिकाउँछ। एक व्यक्ति केही गर्छ वा कुरा भइरहेको सहमत भने, त्यसपछि उहाँले मात्र होइन ज्योति, तर पनि घटना वा घटना कालो पक्ष लिनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, धेरै अब footballers हुन चाहन्छु। व्यावसायिक खेल - कि ठीक छ, तर यो भारी शारीरिक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक तनाव र नसक्नुको पछाडि पूर्ण शिक्षा प्राप्त गर्न। सबै यो तारा एक हुन्छन्। र त्यहाँ आफ्नो क्यारियर को अन्त पछि जीवन मा पनि प्रसिद्ध खेलाडी र आफैलाई फेला पार्न सकेन जहाँ कथा, एक सेट छ। तसर्थ, एक सधैं आफ्नो कार्यहरूको परिणाम र उहाँले छान्नुभएको छ बाटो मनमा गर्नुपर्छ।
सायद यो "प्रेम अमृत, प्रेम र चिसो," एक भारी सडक जागरूकता विविधता र जीवनको जटिलता मात्र एउटा सुरुवात विन्दु के मतलब को प्रश्न।
ढाल प्रेम - नियमहरूमा एक प्रस्थान
मा रूसी को प्रत्यय के हुन्?
CTP के हो?
Sims3त्रुटि 12 - कारणहरू र समाधान
रूसी टिभी श्रृंखला "राम्रो हुन सकेन।" चलचित्र समीक्षा
Zaskrinit पत्राचार रूपमा? सजिलो!
कयिनले (Marvel हास्य) रूपमा "क्लोन को सागा" मा सबै भन्दा राम्रो स्पाइडरम्यान प्रतिहरू एक
स्पेनी Enticer Lope डे वेगा: जीवनी र काम
बाट "thrush" के हो?